Lalao Olimpika 2010 - Wikipedia
Lalao Olimpika 2010
Ny lôgô ofisialin'ny Lalao Olimpika 2010 any Vancouver
Ny Lalao olimpika 2010 na koa Lalao Olimpikan-dririnina 2010, na lazaina Lalao Olimpikan-dririnina faha XXII (21), dia hisy amin'ny 12 hatramin'ny 28 Febroary 2010 any Vancouver, eo amin'ny faritany mizaka-tenan'i Kolombia Britanika, any Kanada. Ny anaran'ny komity fandrindrana, ho an'ny lalao olimpika sy paralimpika dia COVAn amin'ny fiteny frantsay ary VANOC amin'ny fiteny anglisy.
Io Lalao olimpika io ny ho fahatelo atao any Kanada. Talohan'io, efa nandray ny Lalao Olimpika 1976 ny Kanada tany Montreal sy ny Lalao Olimpika 1988 tany Calgary. Ny vohitr'i Whistler, anisan'ny toerana isian'ny Lalaon'ny 2010, dia efa nametraka ny kandidatiorany tamin'ny 1976 fa tsy naharesy.
Araka ny fomba olimpika, ny ben'ny tanànan'i Vancouver taloha, i Sam Sullivan, dia nahazo ny saina olimpika nandritry ny seremônia fanidiana ny Lalao Olimpikan'i Turin tamin'ny 2006. Nampiakarina teo amin'ny tranon'ny ben'ny tanàna izy tamin'ny 28 Febroary 2006 hatramin'ny seremônia fankafana tamin'ny 12 Febroary 2010.
Fanatanjahantena misy[hanova | hanova ny fango]
Kombine Nôrdika (3)
Patinage de vitesse (12)
Ski acrobatique (6)
Mbola ambangovangony amin'ny resaka lalao ity lahatsoratra ity ary tokony hofenoina.
((fr)) Site officiel des XXIEndrika:Exp Lalao olimpikan-dririnina
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Lalao_Olimpika_2010&oldid=996008"
Voaova farany tamin'ny 2 Aogositra 2020 amin'ny 12:32 ity pejy ity.